> Resource> Video> Olee otú iji Play ọ bụla WMA on iPhone Mfe
iPhone bụ oké obere ngwaọrụ na-egwu egwú, na ọ na-akwado nnọọ ọtụtụ nke ọdịyo faịlụ ụdị. Ma, ọ ike aka Windows Media Audio (WMA) faịlụ dị ka WMA format na-ekesịpde site Apple nnukwu ama ya aka, Microsoft. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu WMA on iPhone, ị ga-eji a ọkachamara ngwá ọrụ iji tọghata WMA ka iPhone dakọtara formats. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime WMA faịlụ nwere ike na-echebe site DRM. All free converting ngwá ọrụ dị ka iTunes na ahịa ida iji tọghata DRM-echebe WMA ka iPhone. Ya mere, ị ga-bettter eji ngwá ọrụ dị ike iji tọghata ọ bụla WMA faịlụ maka ire ụtọ playback on iPhone.
Wondershare Video Ntụgharị ike ga-eji dị ka oké WMA ọkpụkpọ maka iPhone. Ọ pụrụ inyere gị tọghata ma DRM-free na DRM-echebe WMA faịlụ ka iPhone akwado formats ọsọ ọsọ na mfe. Nke ahụ pụtara na i nwere ike na-eche na-enwe ihe ọ bụla WMA dijitalụ music na gị iPhone na enyemaka nke oké WMA ka iPhone Ntụgharị.
Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwekwara ike iji oké Mac mbipute a ngwa - Video Ntụgharị maka Mac ime nke a ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, na-adị mfe, na ike. Ma mara na Mac version nwere ike tọghata naanị unprotected WMA faịlụ ka iPhone.
Ndị na-esonụ nkuzi ga-egosi gị otú na-egwu ọ bụla WMA on iPhone on Windows n'elu ikpo okwu. Ma ime on Mac bụ fọrọ nke nta ahụ.
1 Ibu Ibu WMA a WMA ka iPhone Ntụgharị
Nke a WMA ka iPhone video Ntụgharị akwado ikpuru-na-dobe. Ọ pụtara na ị pụrụ ozugbo ịdọrọ gị obodo WMA faịlụ ka a na ngwa akakabarede ebi ndụ. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ niile kwukwara WMA faịlụ a ga-emere dị ka ndị a. A na ngwa na-enye gị ụzọ ndị ọzọ iji mbubata gị WMA faịlụ. Ma ọ bụ i nwere ike pịa Add Files bọtịnụ Ibu Ibu WMA faịlụ.
2 Họrọ MP3 ma ọ bụ iPhone dị ka mmepụta format
Iji na-egwu WMA ọdịyo faịlụ na iPhone, i kwesịrị ịhọrọ iPhone dakọtara format dị ka mmepụta usoro. Dị ka anyị maara, MP3 nwere ike na-egwuri na kasị ngwaọrụ, gụnyere iPhone. Ebe a, ị nwere ike họrọ MP3. Ma e wezụga ya, e nwere ihe ọzọ nhọrọ ị nwere ike họrọ dị ka mmepụta usoro. Nke ahụ bụ kachasị usoro maka iPhone.
Mbụ, see format oyiyi na mmepụta Format ebi ndụ. Mgbe ahụ, a na ngwa si mmepụta format ndepụta, ị nwere ike ịga Format> Audio> MP3 ma ọ bụ gaa Ngwaọrụ> Apple> iPhone (M pụtara kpọmkwem iPhone nlereanya na ị nwere).
3 tọghata WMA ka iPhone
N'agbanyeghị ihe ụdị WMA faịlụ na ị mbubata iji tọghata, DRM ma ọ bụ Non-DRM WMA faịlụ, a ngwa ga-tọghata ha ka ha iPhone akwado faịlụ na wepụ DRM nchebe n'out oge ma ọ bụrụ na ndị dị adị.
Ime ya, ị dị nnọọ mkpa see tọghata bọtịnụ na ala nri akuku nke a usoro si window ugbu a. Mgbe ahụ, nke a oké WMA ka iPhone Ntụgharị ga-eme ndị ọzọ ihe ị na-akpaghị aka. Na ndị ikpeazụ ihe ị chọrọ ime bụ ịchọta ndị converted faịlụ site kpọmkwem ọkụkụ Open nchekwa button mgbe nchigharị, na mgbe nyefee ha gị iPhone na obi ụtọ site iTune mmekọrịta. Site n'ụzọ, akakabarede usoro dị nnọọ ngwa ngwa, dị nnọọ a nkeji ole na ole.
Video Mkpebi bụghị Supported- Edozi
Olee otú Download MovieFone Videos na a Click